Yeroo dhiyoo asitti hooggansa ODP gidduutti wal qoodiinsi mula’achaa dhufan sadarkaa sodaachisaa irra ga’era. - Kichuu
HomeAfaan OromooNewsYeroo dhiyoo asitti hooggansa ODP gidduutti wal qoodiinsi mula’achaa dhufan sadarkaa sodaachisaa irra ga’era.
Ka’umsi adda qoodamuu hooggansaas garaagarummaa ejjennoo sabboontummaa Oromoo irratti mul’atedha. ‘Team Lamma’ fi ‘Team Abiy’ jedhamanii qoodamaniiru. ‘Team Lamma’n Oromummaa utubaa yaada paartichaa gochuudhaan gara tokkummaa sabootaatti adeemuu kan barbaadu wayta ta’u ‘Team Abiy’ immoo Itiyoophiyummaa bu’uura yaada paartii gochuudha. Ka’umsa waldhibdee kan ta’e immoo Falaasamni Eda’amuu faallaa faayidaa uummata Oromoo deemuu isaa irraan kan ka’edha. Fulbaana 12/2012 hoggantoota ODP Eda’amuu irratti gaaffii kaasan qorachuuf karoorfamee kan ture hambisuudhaan namoota shakkan OBN irratti yaaada laattu jechuun istuudiyoo Finfinneetti waraabbataniiru. Namoota qaama ‘Team Lamma’ ta’u jedhamanii shakkaman karaa Aadde Caaltuu Saanii fi Kasahuun Goofee akka adda ba’an ta’ee jira.
Sadarkaa Koree Hojii-Raawwachiistuu irratti yaada sabboontummaa Oromoo kan adeemsisan Obbo Lammaa Magarsaa, Obbo Fiqaaduu Tasammaa, Obbo Umar Huseenii fi Dr. Alamu S. yoo ta’an Dr Abiy Ahmed, Adaanech Abeebee fi Birhaanuu Tsaggaayee akkasumas Addisuu Araggaa garee Itoophiyummaa balbaloomsu dha. Obbo Shiimallis ejjennoon isaanii hinbeekamne, gartuu sabboonummaa nama qabatu fakkaatu. Obbo Shiimallis sodaa irraan kan ka’e ejjennoo mataa ofii horachuuf rakkataniiru.
Caccabiinsi sadarkaa hooggansa olaanaatti mula’ate kun koree qindeessitu godinaa, Magaalaa fi Aanaaf kan ifa ta’e garagarummaa yaadaa Dr Abiy yii fi Obbo Lammaan goolaba waltajjii leenjii Eda’amuu Adaamaatti kennamaa ture irratti agarsiisanidha. MM Abiy ‘Team Lamma’ balleessanii falasamicha hojiirra oolchuuf kakachuu isaanii kan yadatamu dha. Guyyaa hara’a (15-01-2012) waltajjii goolaba marii hayyootaa dhimma Eda’amuu irratti Magaalaa Bishooftuutti Hoteela Kurruuftuutti godhaniin sadarkaa sabboontotaan “Losers” jedhanii namoota maqaa dh’anii arrabsuu fi humna waraanaa ‘republican guard’ qabaniin dhaadachaa ooluu irra ga’aniiru.
Rakko hoggansa isaanii walitti qabachuu dadhabuuf hawwii diktaaterummaa isaanii milka’uu dhabuu isaanii irraa kan ka’e MM Abiy abdii kutataa waan jiraniif namoota miidhuu danda’au. Gochaan isaan amma agarsiisaa jiran barreeffamni Eda’amuu jedhu kan isaanii akka hintaane miirkaneessa. Namootni nageenyi isaanii tikfamuu qabu isaan akka Obbo Lammaa fi Aadde Xayiibaa dha. Yaaliin garaagaraa irratti raawwachuu danda’a. Sabboontotni, Qeerroo fi uummatni Oromoo marti gurra kennee walcaqasaa deemuu fi waamicha qabsoo diddaa garbummaa marsaa haaraaf wal qopheessuun barbaachisaa dha.